***မိန်းမသား ချင်းမို့ စာနာပါ*** | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Know-How, DIY » ***မိန်းမသား ချင်းမို့ စာနာပါ***
Posted by ရွာသူလေးချမ်းချမ်း(ရင်တွင်းဖြစ်) on Aug 30, 2011 in Know-How, DIY | 14 comments
ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံ ရဲ့ ” မနက်ဖြန်များကို ဖြတ်သန်းနေသောစိတ်ကူးများ ” စာအုပ်ထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကို ပြောပြပါ့မယ်။
တွေက ” ပြည့်တန်ဆာမကို ကျောက်ခဲနဲ့ ပစ်ပေါက်အပြစ်ပေးရမယ်လို့ မောရှေ (MOSES) က အမိန့်
ချခဲ့ကြောင်း၊ ဒီကိစ္စမှာ သင်ကော ဘယ်လိုအမိန့်ချမလဲ ” လို့ ဂျီးဇက်ကို ၀ိုင်းမေးကြပါတယ်။
ဒီတော့ ဂျီးဇက်က သူတို့ကို မော့ကြည့်ပြီးတော့ ” သင်တို့အထဲက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်
ကင်းတယ်ဆိုတဲ့သူဟာ ရှေးဦးစွာပဲ ဒီအမျိုးသမီးကို ခဲနဲ့ပေါက် ” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့….လူသားချင်းစာနာစိတ်နဲ့ ပြည့်တန်ဆာအလုပ်က ရွံစရာ မသတီစရာ ဆိုရင် အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကို အားမပေးသင့်ပါဘူး။
တလောက Massage မှာ ၀င်ဖမ်းသွားတဲ့ သတင်း ဖတ်မိလိုက်ရပါတယ်.
.မြန်မာတွေလဲ ပါတယ်ဆိုလို့ ပါ
ပုံထဲမှာကြည့်ရတာတော့ မိန်းခလေးတွေပြုံနေတာဘဲ..အထုပ် လေးတွေနဲ့ .ဖမ်းခံထားရတာ
ရွာသူ ချမ်းချမ်းရဲ့ စေတနာ၊မေတ္တာ တွေနဲ့ပေါင်းစပ်၊ကျိုးစား ရေးသားထားတဲ့ စာတွေကြောင့်
အမျိုးကောင်းသမီးများ အတိုင်းတာတစ်ခုထိတော့ တိုးတက်လာမယ်မျှော်လင့်ပါတယ်
နီးစပ်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်က မိန်းမပျက် ဆိုတဲ့ မိန်းခလေးများတွေ့ ရင်လဲ အတတ်နိုင်ဆုံး ကယ်တင်နိုင်ကြပါစေကွယ်…
ချမ်းချမ်းရေး အားပေးသွားတယ်နော့် ”သားသမီးတွေကို
ဆင်းရဲတဲ့သူနဲ့ မပေါင်းဖို့ ၊ပြည့်တန်ဆာမိန်းမပျက်ရဲ့ သမီး နဲ့ မပေါင်းဖို ” အဲလိုမိဘမျိုးတွေအများကြီး တွေ့နေရတယ်လေ အဲဒီထိုင်းအမျိုးသမီးလေးက ပညာရှိတယ်နော် ကို့သားသမီးကို ဆုံးမပဲ့ပင်တတ်တယ် ကိုယ်လဲ အဲဒီမိန်းကလေးဆိုရင် ကိုယ်လဲရှက်ရွံ့အားငယ်မိသွားလိမ့်မယ်
“””လူကောင်း လူဆိုးဆိုတာ လူမျိုးနဲ့ ဘာသာနဲ့ မဆိုင်ဘူးတဲ့။ လူသားချင်းကိုယ်ချင်းစာစိတ် စာနာစိတ်နဲ့ ပဲဆိုင်တယ်တဲ့။ ကိုယ်နဲ့ လူမျိုးမတူ ဘာသာမတူပေမယ့် လူသားချင်းကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိတဲ့သူတွေရှိသလို လူမျိုးချင်းတူ ဘာသာချင်းတူပြီး ယုတ်မာကြတဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲတဲ့။
သမီးသာ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်ထိန်းနိုင်ရင် စိတ်ကောင်းထားပြီး ရတနာသုံးပါးကိုသာ ရိုသေရင် ဘယ်နေရာသွား ကောင်းတဲ့သူနဲ့ တွေ့ မှာပဲတဲ့။ အဓိက ကိုယ်တိုင်က သတိနဲ့ အနေအထိုင်တတ်ဖို့ ပဲ အရေးကြီးပါတယ်တဲ့။”””
အများအားဖြင်. ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာဆိုရင် နဲနဲတော. နှိမ်ကြပါတယ်။ ဘန်ကောက်လိုနေရာမျိုးထက် နယ်စပ်တွေ၊ တစ်ချို.ပြည်နယ်ဘက်တွေက မြန်မာေ၇ွှ.ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ တော်တော်ခံရပါတယ်။ တစ်ချို.ပြည်နယ်ဘက်တွေဆို၇င် မြန်မာတွေ အလုပ်ထဲကနေ အပြင်ကိုသွား၇င် ဒီကဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမားတွေဝတ်တဲ.အင်္ကျီလိုမျိုးဝတ်ပြီးမှ သွား၇ပါတယ်။ အဲဒီအကျီင်္မှာ စာရေးထားပါတယ်။ ကျွန် လို.အဓိပ္ပါယ်ရတဲ. ထိုင်းစာ နဲ.ရေးထားတာပါ။ ၂ ယောက်ကို ၃ ဖွဲ.ကွဲနေတဲ. မြန်တွေထောင်ထားတဲ. ဘာအဖွဲ. ညာအဖွဲ.တွေကတော. ကူညီဖို.ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
“ကျွန် လို.အဓိပ္ပါယ်ရတဲ. ထိုင်းစာ နဲ.ရေးထားတာပါ”
” လူကောင်း လူဆိုးဆိုတာ လူမျိုးနဲ့ ဘာသာနဲ့ မဆိုင်ဘူးတဲ့ ”
ကိုယ်ချင်းစာတရားဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာ ထားသင့်တဲ့တရားပါ
ယောက်ျားအချို့ (အချို့) က ကိုယ်ချင်းစာတရားမရှိ မိုက်ရိုင်းတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်
အမျိုးသမီးတွေဘက်ကလည်း လူတိုင်းကို ယုံစားလို့မရဘူးဆိုတာ သိသင့်ပါတယ်…
ကျနော်က အမျိုးသမီးတွေကို အပစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးနော်… ဖြစ်သင့်တာကိုပြောတာပါ…
လူလောကကြီးမှာ မတရားတာလုပ်တဲ့လူဟာ နောက်ဆုံးမှာ ဘေးရောက်သွားမှာပါ…
နစ်နာသွားတဲ့သူတွေကိုလည်း ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိတဲ့ လူတွေက ပစ်ထားမှာ မဟုတ်ပါဘူး …
တချိန်ကမထင်မှတ်တဲ့ အမှားတခုကို ပြုပြင်ချေဖျတ်နေတဲ့သူကို အခွင့်အရေးပေး လက်ကမ်းကြိုသင့်ပါတယ်…
ဒါမျိုးလေးတွေ များများရေးပြီး အသိပညာဖြန့်ဝေပေးပါအုံးလို့
လူကောင်း လူဆိုးဆိုတာ လူမျိုးနဲ့ ဘာသာနဲ့ မဆိုင်ဘူးတဲ့။ လူသားချင်းကိုယ်ချင်းစာစိတ် စာနာစိတ်နဲ့ ပဲဆိုင်တယ်တဲ့။ ကိုယ်နဲ့ လူမျိုးမတူ ဘာသာမတူပေမယ့် လူသားချင်းကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိတဲ့သူတွေရှိသလို လူမျိုးချင်းတူ ဘာသာချင်းတူပြီး ယုတ်မာကြတဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲတဲ့။
ဒီစကားမျိုးကို မှတ်သားထားပြီး ပြန်လည်တင်ပြတဲ့ ချမ်းချမ်းကိုလဲ လေးစားပါတယ်…
အစအဆုံး သေသေချာချာကို ဖတ်သွားပါတယ်။ စာအရေးအသား အတော်ကောင်းတာပဲ။ -ါ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အခုမှ သိခွင့်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ကျွန်မမှာ သူငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ် သင်တန်းတက်ရင်း ခင်ခဲ့တာပါ။ သူ့အမေက မိန်းခလေးတွေကို လိုချင်ရင် ရှာပေးတဲ့ေ-ါင်းပါ။ ကျွန်မလည်း ခင်စက မသိဘူး သူဖွင့်ပြောမှ သိတာ အ.. ချက်တော့ မပြောပါနဲ့။ ကျွန်မက သူ့ကို အနေအေးလို့ ခင်ကိုခင်တာ။ နင်က လှလည်းလှတယ် စိတ်ထားလည်းကောင်းလို့ ငါက ခင်တာပြောတော့ သူကပြောတယ် ငါ့ဘ၀ကို နင်သေချာသိရင် နင်လည်း ငါနဲ့ ပေါင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ ဘာလို့လဲ လို့ မေးတော့ ငါ့အမေကေ-ါင်း လုပ်တာတဲ့။ နင့်မှာ အဖေ မရှိဘူးလား ဆိုတော့ ရှိတယ်တဲ့။ ငါ့အဖေကလည်း ဒါပဲ လုပ်တာတဲ့။ ငါ့ကိုတော့ သူ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အိမ်နား မလာရဘူး အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လူတွေနဲ့ စကားကို ရပ်မပြောရပါဘူးတဲ့ ဒါပေမဲ့ လူတွေကတော့ ငါလည်း တနေ့ ဒါပဲလုပ်မယ်လို့ စွပ်စွဲတယ်လေ။ ငါ့အမေရဲ့ ဒီ မကောင်းတဲ့ အရိပ်ဆိုးက ငါ့ကို ဒီလို ခံစားစေမှတော့ ငါ ဖြစ်နိုင်ပါ့ဥိးမလား နင်စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့။ ငါ ဘယ်လောက် ကောင်းအောင်နေနေ ငါနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ လူတွေက ငါ့အကြောင်းသိတာနဲ့ မျက်နှာပျက်ပြီး ငါ့ကို ခွာသွားတာကြည့်ပဲမို့ အရည်တော့ ထူနေပါပြီတဲ့။ ကျွန်မ သူ့ကို သနားလိုက်တာ အဲ့ဒီတုန်းက ပြောပါတယ်။ သူက သိပ်လှတာ ဆံပင် အရှည်ကြီးနဲ့ ဖြူဖြူသွယ်သွယ်လေး။ သင်တန်းပြီးတော့ ကွဲသွားကြတယ် နောက် နှစ်အတော်ကြာမှ ပြန်တွေ့တော့ ဘဏ်တခုမှာ လက်ထောက်မန်နေဂျာဖြစ်နေပြီ။ အိမ်ထောင်လည်း ကျနေပြီ။ ကျွန်မမှာ သူ့အတွက် တကယ်ကို ၀မ်းသာခဲ့တာ။ သူ သူ့ဘ၀ ဆိုးကြီးထဲက ရုန်းထွက်နိုင်လို့လေ။ ချမ်းချမ်းရေ ကွန်မန့်က ပို့စ်ထက် ရှည်သွားလားမသိ ။ တိုက်ဆိုင်တာနဲ့ ပြောချင်သွားလို့။
တန်ဖိုးထားတတ်မှ ကိုယ်တိုင်လည်း တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်မှာပါ
နိမ့်ကျသူကို ကရုဏာလေးထားလိုက်ရင် ဗြဟ္မစိုရ်တရားနဲ့လည်း ညီသွားပါတယ်
ကွန်မန်းပေးသွားတဲ့ hmee ကလဲ
မိန်းမသား အများစု တွေ မှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိတယ်ဗျ ။
အဆိုးဆုံးက မိခင်စိတ် ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ပါပဲ၊
မိန်းမသားတွေကို ကျနော်တို့ယောင်္ကျားသားတွေ က ငဲ့ညှာသင့်ကြောင်းပါ၊
ကျနော်တို့ ခင်ဗျားတို့ အားလုံးသိထားပီးသားပါ၊
ကျနော်တို့ခင်ဗျားတို့ အကြီးအကျုယ် နာမကျန်း ဖြစ်လို့ ယောက်ရမ်း ခဲ့ရင်တောင်..” အမေ ” အမေ နဲ့
တာကြရတယ် မဟုတ်လား၊ မိန်းမသားတွေ ဟာ မိခင်မျိုးနွယ်တွေမို့ ကြုံကြိုက်လာခဲ့ရင် ငဲ့ညှာ သနားစိတ်
အရေးအသားအဖြတ်အတောက် အရမ်းကောင်းပါတယ် …. ၀ထ္တုစာအုပ်ရေးပါလား ….. ဗီဒီယို ရိုက်ရင်တော့ အကယ်ဒမီ တွေအများကြီးရမှာ ….. အခုလိုပို့တွေကို မြန်မာမိန်းကလေးတွေများများ ဖတ်သင့်ပါတယ် …. ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနေကြဖို့ပါ ….. ယောက်ကျားလေးများကလည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ထိန်းသိမ်းဖို့လိုပါတယ် …. ကိုယ့်ရဲ့ဆန်န အတွက်နဲ့ သူတစ်ပါး ဒုက္ခဆင်းရဲကျရောက်မှာကို ဘယ်သောအခါမှမလုပ်ကြပါနဲ့ …. အခုခေတ်ကမြန်မာမိန်းကလေးတွေက အရမ်းကိုလွယ်နေကြပါတယ် …..ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ယောက်ကျားယူတယ် …… မြန်မာအမျိုးသမီးလေးတွေ ရှေးရှေးကမြန်မာတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကို ဖျက်ဆီးနေကြတာလား ….ဗိုလ်ချူပ်ပြောသလို ဖာနိုင်ငံကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် ………… အမျိူးသား၊အမျိူးသမီး အားလုံးထိန်းသိမ်းသင့်တယ် ….